လင်းသန့်| January 30, 2013 | Hits:20,639
| | ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကိုရီးယား နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် Ahn Jae-wook (ဓာတ်ပုံ – The Korea Times)
တိမ်မြုပ်နေသည့် အနုပညာများကို ဖော်ထုတ်မည့် Open Micကိုင်ဇာ၊ မေဆွိ၊ မေခလာတို့ရဲ့ “သူငယ်ချင်း သုံးယောက်” Live Show ကျင်းပမယ်သရဖူနှင့် အလှမယ် ရွေးချယ်ခြင်း ပြဿနာများနရဲစွမ် ဇတ်ကား အတွက် ထိုင်း ဒါရိုက်တာ တောင်ငူကို လာရောက်လေ့လာSexy မော်ဒယ်လ်တွေ ကပြမယ့် ပါတီ ကျင်းပမယ့်နေရာ အပြောင်းအလဲရှိ
Dr.Phyu Phyu Win January 30, 2013 - 4:29 pm NLD-LA in Korea too?What are they doing in Korea?NLD(Myanmar) approved them too?Japan NLD-LA is worst than MM army.
Reply TAYZA January 30, 2013 - 7:49 pm I do believe it . Because ASSK herself shamleesly received Peace Prize in Hawaii while the country people are suffering day and night under war.
Reply I Hate Burmese January 31, 2013 - 2:51 am The northern KACHIN is the war, Aung San Suchyi is hi hi ha ha. Aw I see Burmes peoples story will not bringingagood way today” why?
Reply ngai January 31, 2013 - 2:12 pm ဘာလျှောက်လုပ်နေတာလဲ…
Reply Mr Kian January 31, 2013 - 11:09 pm ASSK is notaAngel .she is not good enough. she is more look likeaBean Seed ofaBag of Bean…,one of Burma Proverd
Reply yu February 3, 2013 - 1:30 pm Daw Su is not Present PM of Myanmar. Kachin war is depend on the leaders of Myanmar army and KIA.